Nagarik Bazaar - अब आइफोनमा पनि एन्ड्रोइड इन्स्टल गर्न मिल्ने !
अब आइफोनमा पनि एन्ड्रोइड इन्स्टल गर्न मिल्ने !
एप्पलको आइफोनमा iOS अपरेटिंग सिस्टम चल्छ । उक्त अपरेटिंग सिस्टम एप्पलको स्वामित्वमा रहेको अपरेटिंग सिस्टम हो जुन आइफोनमा मात्र इन्स्टल गरिएको हुन्छ । आइफोनमा आधिकारिक तरिकाले एन्ड्रोइडहरू चल्दैनन् ।
“ एप्पलले आफ्नो आइफोनहरूमा आफ्नै अपरेटिंग सिस्टम मात्र हालेर बेच्दै आएको छ । यसले गर्दा एप्पलले प्रयोगकर्ताले के के प्रयोग गर्न पाउछन र पाउदैनन् भनेर नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ । आइफोन प्रयोगकर्ताहरूलाई विकल्प दिने हेतुका साथ यो प्रोजेक्ट सुचारु गरिएको हो ।” - प्रोजेक्टका संस्थापक बताउछन् ।